धरानका गगनमान श्रेष्ठः होटल म्यानेजमेण्टका हस्ती !::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानका गगनमान श्रेष्ठः होटल म्यानेजमेण्टका हस्ती !
पाए मास्टर सेफको उपाधि
धरानः अग्लो कद, कोट-पाइन्टमै सजिएर हिँड्दा भीआइपी नै देखिने खालको फिगर अनि हँसिलो मुहार, हाँसिरहने स्वभाव छ भनेर मात्रै चिनिँदैनन् धरानका गगनमान श्रेष्ठ । नम्र बोलीचाली, सालिन, भद्र व्यक्तित्वका रुपमा उनी चिनिन्छन् । कसैलाई भनेर नबिझाउने साथै व्यवहारमै पनि देखाउने उनको स्वभाव छ । हुन त श्रेष्ठको परिवार नै यस्तै छ । भनौं, गज्जबको परिवार । कसैलाई नबिझाउने, रिस, डाह, इष्र्या, द्वैषको भावना नभएको । भन्छन्, ‘परिवारको माहौल नै यस्तो छ कि, जसले आफूलाई पनि त्यस्तै बनायो ।’ हुन पनि हो, जस्तो परिवार, उस्तै छोराछोरी ।
उनी अहिले होटल म्यानेजमेण्टमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । धरानस्थित हात्तिसार क्याम्पसमा बिएस्सी न्युट्रीसन विषयमा अध्यापन गर्दै आएका उनी शुरुवात चरणदेखि नै धरान–१६ स्थित युएन, नवोदय कलेजमा होटल म्यानेजमेण्ट र बिएचएममा जोडिए र पठनपाठन गर्दै आएका छन् । उनी हाल होटल म्यानेजमेण्टको कोअर्डिनेटर हुन् ।
२०४८ सालमा काठमाडौंमा सरकारीस्तरबाट पहिलोपटक खुलेको एचएम टिटिसी (होटल व्यवस्थापन तथा टुरिजम ट्रेनिङ सेन्टर) मा अध्ययन गरेका थिए । हाल सो कलेजलाई नाथम भनिन्छ । त्यसपछि उनले धेरै वर्ष होटलमा पनि काम गरेको अनुभव रहेको बताए । ‘२०४८ सालमा पढाइ सकाएँ, त्यसपछि ८ वर्ष होटल क्षेत्रमै बिताएँ, काठमाडौंका फाइभ स्टार होटललगायतमा पनि काम गरें’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि २०५७ सालमा धरान आएपछि पठनपाठनकै क्षेत्रमा लागिरहें ।’ त्यतिबेला पनि धरानमा पहिलो होटल व्यवस्थापन ट्रेनिङ सेन्टर खुलेको र त्यसमा आफूले अध्यापन गरेको उनी बताउँछन् ।
उनी हाल पनि होटलमा भन्दा पठनपाठनको क्षेत्रमै चिनिएका छन् । अग्लो कदका उनले आफूलाई होटल म्यानेजमेण्ट र बिएचएममा प्रदेश १ मै अग्लो व्यक्तित्व बनाएका छन् । उनलाई प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लामा अधिकांशले चिन्छन् । पठनपाठनकै क्षेत्रमा उनी चिनिँदै गएका हुन् । विराटनगरमा पनि केही वर्ष अध्यापक गराएका उनले यस क्षेत्रमै निरन्तर लागिरहे । ‘अहिले विराटनगरदेखि धरान हुँदै प्रदेश १ का अधिकांश अभिभावक, विद्यार्थीले चिन्नुहुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कारण हो, यही क्षेत्रमा निरन्तरता ।’ भनौं, उनी अहिले होटल म्यानेजमेण्ट क्षेत्रको हस्ती नै बनेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
आतित्य सत्कार, मिठो बोलीमा मुस्कानसहितको सेवा दिनेमा उनी पनि पर्छन् । यही कारण पनि उनको व्यक्तित्व चुलिएको हो । युएन, नवोदय कलेजका क्याम्पस प्रमुख डम्बरकुमार तुम्बापो दक्ष, अनुभवी उनको तारिफ गर्न छुटाउँदैनन् । ‘दक्ष, अनुभवी अध्यापकहरुकै कारण पनि कलेजमा विद्यार्थीको ‘फ्लो’ बढेकै हो’, उनी थप्छन्, ‘त्यसमा पनि उनको आतिथ्य सत्कार, मिठो बोली, मुस्कानसहितको सेवा विद्यार्थीले खुब रुचाएका छन् ।’
मानार्थ मास्टर सेफको उपाधि
उनको जीवनको सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा दृढ थिए । तर सपना पनि पूरा हुँदै गएको आफूले अनुभव गरेको उनी बताउँछन् । उनले मास्टर सेफको मानार्थ उपाधि पाएका छन् । ‘मास्टर सेफ भनेको सेफलभन्दा माथिको हो । आफ्नो विषयमा निपूर्ण भएपछि त्यसलाई मास्टर सेफ भनिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कति समय काम गरेको अनुभव छ, यो क्षेत्रमा कति समय बिताएको, कुन स्तरको काम गरिरहेको आदि हेरेर यस्तो उपाधि दिइन्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि कलेज पढाउनेलाई टिचरमात्रै गनिन्थ्यो भने अहिले आएर कामको अनुभवीलाई मास्टर सेफ भन्न थालियो, अहिले गनिन्छ ।
रोयल बङ्गाल मास्टर सेफ अर्गनाइजेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पनि मास्टर सेफको उपाधिले सम्मान पाएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उनीसहित चार नेपालीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । आरटिआरके होटल स्कुलका फाउन्डर सेफ प्रेम तुम्बापो, गेस्ट्रोनोमी एसोसिएसन नेपालका प्रेसिडेन्ट मास्टर सेफ नारायण थपलिया, सगुन बेकरी क्याफेका फाउन्डर सेफ अमर श्रेष्ठलाई मेडल, प्रमाण पत्र, सेफ युनिफम, ट्रफीसहित सम्मान गरिएको थियो । नेपाल र भारतको खाना पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनको सम्बन्धलाई दर्विलो स्थापित गर्नका निमित्त साथै प्रदेश १ को पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त यो ठूलै उपलब्धि भएको उनी बताउँछन् ।
के हो होटल म्यानेजमेन्ट ?
होटल म्यानेजमेन्ट भनेको खाना पकाउन सिकाउने मात्र होइन, यो प्राविधिक विषय हो । नपढेकाले पनि होटल चलाउन सक्छन् । तर जसले पढेर होटल क्षेत्रमा काम गर्छ उसले दिने सेवामा धेरै फरक हुन्छ । गुणस्तरीय खाना बनाउने क्षमता पनि पढेकासँग हुन्छ । त्यसैले होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा होटल म्यानेजमेन्ट हो । यसलाई आतिथ्य सत्कार शिक्षा पनि भनिन्छ । पर्यटकलाई आतिथ्य सत्कार गर्ने, खुवाउने, बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउन सिकाइने शिक्षा हो । पर्यटकलाई मुस्कानसहित सत्कार गरेर रमाइलो वातावरणमा बिदाई गर्नेसम्म सिकाउने शिक्षा होटल म्यानेजमेन्ट हो ।
मुस्कानसहितको सेवा हो
नेपाल पर्यटनको हब हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढिरहेका छन् । लाखौं विदेशी पर्यटक घुम्न, अध्ययन अनुसन्धानको लागि आइरहन्छन् । पर्यटक बस्ने भनेको होटल, लज, रिसोर्टमा हो । पर्यटकले राम्रोे खाना, बस्न र मनोरञ्जन खोजेका हुन्छ । त्यसका लागि मिठो बोलीमा मुस्कान सहितको सेवा आवश्यक पर्छ । पर्यटक आउँदा र बिदाइमा गरिने सत्कार महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले विश्वसामू नेपाललाई चिनाउने काम गर्छ । यी सबै विषयको व्यवस्थापन होटल म्यानेजमेन्ट पढेकाले गर्ने हो ।
स्वउद्यम बन्ने विषय
होटल भन्ने बित्तिकै खाना पकाउने मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर पछिल्लो समय होटल म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने र रोजगारका अवसर सृजना गर्ने क्षेत्र होटल हो । आतिथ्य सत्कारदेखि खान बस्नसम्म राम्रो वातवरण चाहिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको जो कोहीले गर्न सक्दैन । जसले पढेर बुझेर गरेको हुन्छ । उसले मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ । होटल खोलेर मात्र हुँदैन । राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
होटल म्यानेजमेन्ट पढेपछि हस्पिटालिटी क्षेत्रको कुनै पनि ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ । स्वउद्यम बन्नको लागि यो उपयुक्त कोर्स हो । कृषिपछि सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटन हो । त्यसैले होटल पनि पर्यटनसँग जोडिएको छ । पढ्दा पढ्दै काम र दाम हुने भएकाले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय होटलहरुमा काम गर्ने अवसरका साथै राम्रो तलब हुने भएकाले पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । होटल म्यानेजमेन्ट पढेर व्यवसाय गर्नेहरु सफल पनि भएका छन् ।